30 Minamato yeMinamato Pane Rumutsiridzo Nemavhesi eBhaibheri | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Minamato yeMinamato Pane Rumutsiro Nemavhesi eBhaibheri
30 Minamato yeMinamato Pane Rumutsiro Nemavhesi eBhaibheri
2 Makoronike 7:14 Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaka chiso changu, nokurega nzira yavo yakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndikavakangamwira zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo.
Rumutsiriro ndizvo zvatiri kuda mumuviri waKristu nhasi. Tinofanirwa kusimudza vatendi vanoziva Mwari uye kudenga vanoziva kwete kungoda zvinhu chete. Nhasi tichave tichiita minamato yekumutsidzira parumutsiro nemavhesi ebhaibheri. Sezvo iwe uchiita iyi minamato inonongedzera parumutsiriro, iyo moto Mwari mukati mwako achazomutsidzira patsva, kushingirira kwaMwari mukati mako kuchauya uri mupenyu zvakare uye iwe shungu dzaMwari huchawedzera muzita raJesu. Ini ndanyorawo mamwe mavhesi eRevival bhaibheri anozovhura maziso edu kushoko raMwari rinozomutsidzira mweya yedu zvakare. Sezvo iwe uchinamata uyu munamato unonongedzera parumutsiriro, ini ndinoona Mwari vachikushanyira iwe patsva muzita raJesu.
Nei Rumutsiriro weMinamato yeRumutsiriro
MuKristu wese anoda rumutsiriro, kereke yega yega inoda rumutsiriro, sangano rega rega, inoda rumutsiriro. Kumutsidzirwa zvinoreva kumutsidzira kushingairira kwako zvekare kuna Mwari, zvinoreva kupisa zvakare kuna Mwari. Uye kune vamiririri vaviri verumutsiriro, iro izwi neminamato, ndosaka isu takanyora iwo munamato maponi pumutsiridzo nemavhesi ebhaibheri. Pane zvikonzero zvakawanda nei Church ichida rumutsiriro, tichave tiri kutarisa zviviri.
1. Chivi. Chivi chiri munyika nhasi chava kunyoreswa zviri pamutemo, izvo zvinonyangadza zvema pasts zviri kukurumidza kuve tsika dzazvino. Chivi chakatopinda muchechi, mazuva ano isu pano vevafundisi vanoita zvivi zvisingatendeki. Ndosaka isu tichida rumutsiriro muchechi, tinoda Mwari kuti akwire vanhu vane humwari, vanhu vasingazotadzirwa nenyika ino ine zvivi. Tinoda zvimwe mweya wakazadzwa uye nemweya wakadzora vatineriya kumiririra Kristu munguva dzino dzekupedzisira.
2. Vhangeri: Chimwe chikonzero nei tichida rumutsiriro, ndechekuti Vhangeri rinogona kuramba richikura. Isu tinorarama muchizvarwa icho vanhu vasingachaparidzi evhangeri sezvavaifanira kuita, vanhu vava kuita hupfumi pamwe neevhangeri yaKristu. Chiri kunetsa ndechekuti vamwe vanhu vari kutotsanangudza vhangeri uye vachishandisa kurishandisa uye kutora vanhu. Tinoda rumutsiriro, vanhu vanoenda kumigwagwa mikuru, madziro uye vanomanikidza vanhu kuti vauye kukirisitu. Vanhu vanozoparidza Kristu uye kwete chechi. Vanhu izvo zvisingazonyara kuudza vamwe nezvaJesu Kristu. Tinoda rumutsiriro.
Dzidziso dzeMumutsiriro weRumutsiriro
1. Baba, ndinokutendai nekuponeswa kwangu muzita raJesu
2. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba reMweya Mutsvene.
3. Baba, neropa raJesu ndisuke zvivi zvangu zvese uye ndisimbise nemweya wako muzita raJesu.
4. Baba, regai Mweya Mutsvene vandizorodzezve.
5. Baba, nzvimbo yese isina kuvhunika muhupenyu hwangu ipuwe, muzita raJesu.
6. Baba, mundivise nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
7. Yese anti-simba bondage in my life, break, muzita raJesu.
8. O Ishe, vese vatisingazive vatize kubva pamweya wangu uye mweya Mutsvene ngaatore kutonga, muzita raJesu.
9. O Ishe, tora moyo wangu mumweya kune wepagomo.
10. Baba, matenga ngaavhure uye kubwinya kwaMwari kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu.
11. Ini ndinotema mufaro wevadzvinyiriri pahupenyu hwangu kuti ushanduke shungu, muzita raJesu.
12. Mauto ese anoshanda kwandiri ngaaparadzwe, muzita raJesu.
13. Ishe, svinudzai meso angu nenzeve kuti ndigamuchire zvinhu zvinoshamisa kubva kwamuri.
14. Ishe, ndipe rukundo pamiyedzo uye nenjanji yaSatani.
15. Ishe, fungidzirai hupenyu hwangu hwomweya kuti ndirege kumisa kubata hove mumvura isingabatsiri.
Ishe, regedzai Rurimi rwenyu rwemoto pahupenyu hwangu uye mupise tsvina dzose dzemweya dziri mandiri.
17. Baba, nditorei nzara nenyota yekururama, muzita raJesu.
18. Ishe, ndibatsirei kuti ndive ndakagadzirira kuita basa renyu ndisingatarisiri kuzivikanwa kubva kune vamwe.
19. Ishe, ndipe rukundo pamusoro pekusimbisa kushaya simba uye zvivi zvevamwe vanhu ndichiregeredza zvangu.
20. O Ishe, ndipeiwo kudzika uye midzi mukutenda kwangu.
21.Mweya Mutsvene unonaka, usamborega ndichivharira iwe muzita raJesu
22.Mweya Mutsvene unonaka, usamborega ndichiedza kuti ndikwanise kuyedza iwe kusvika muzita rangu muna Jesu
23. Unodikanwa noMweya Mutsvene, shanda wakasununguka mandiri uye kubudikidza neni muzita raJesu
24. Unodikanwa noMweya Mutsvene, cheneswa zviteshi zvehupenyu hwangu muzita raJesu
25. Rega kupisa kwako ishe, kupedze kuda kwangu, muzita raJesu.
26. Rega murazvo weMweya Mutsvene upise paatari yemoyo wangu, muzita raJesu.
27.Mweya Mutsvene, rega simba rako ribude seropa mumatsipa angu.
28. Anodikanwa naMweya Mutsvene
29. Runotapira rweMweya waMwari ,, moto Wako upise zvese zvisiri zvitsvene muhupenyu hwangu muzita raJesu
30. Wadiwa Ho! Yomweya ,, Wako moto ubudise simba muhupenyu hwangu muzita raJesu.
20 Ndima dzeBhaibheri PaRumutsiriro
1. 2 Makoronike 20:15
Akati, Teererai, imwi vaJudha mose, nemwi mugere paJerusaremu, nemwi mambo Jehoshafati; zvanzi naJehovha kwamuri: Musatya kana kuvhunduka nokuda kwavanhu ava vazhinji; nekuti kurwa hakusi kwenyu, asi ndokwaMwari.
2. Mapisarema 18:35
Makandipawo nhovo yokuponesa kwenyu, Ruoko rwenyu rworudyi rwakandibata, Uye unyoro hwenyu hwakandiita.
3. 1 Vakorinte 15:57
Asi ngaavongwe Mwari unotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
4. 2 Vakorinte 2:14
Zvino kuvonga ngazvive kuna Mwari, iyo inogara ichiita kuti tipe kukunda muna Kristu, uye inoratidza kuratidza kweruzivo rwake kwatiri munzvimbo dzose.
5. Mapisarema 20: 7-8
Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza, asi isu ticharangarira zita raJehovha Mwari wedu. Vanowisirwa pasi, vanowa, asi isu tasimuka, timire zvakanaka.
6. Mapisarema 44: 3-7
Nekuti ivo havana kutora nyika neminondo yavo, kana ruoko rwavo haruna kuvaponesa, asi ruoko rwako rworudyi, ruoko rwako, nechiedza chechiso chako, nekuti iwe ukavafarira. Ndimi Mambo wangu, Mwari; Kuburikidza nemwi, tichapwanya vavengi vedu, nekudzvinyirira zita renyu, isu tichavatsika isu vanosimukira.
7. Mapisarema 60: 11-12
Tipe rubatsiro kubva padambudziko: nekuti kubatsira kwemunhu hakuna pasina. Muna Mwari tichaita nesimba, nekuti ndiye achatsika vavengi vedu pasi.
8. Mapisarema 146:3
Regai kuvimba namachinda, Kana noMwanakomana womunhu, asingagoni kubatsira.
Bhiza rinogadzirirwa kuzorwa pazuva rehondo, asi kuchengetedzwa kunobva kuna Jehovha.
10. Mapisarema 118:15
Inzwi romufaro nerokuponeswa riri mumatende avakarurama, ruoko rwaJehovha rune simba.
11..Eksodho 15: 1
Ipapo Mozisi akaimbira Jehovha rwiyo urwu kuna Jehovha, ivo vana vaIsiraeri, vakataura, vachiti, Ndichaimbira Jehovha, nekuti wakunda zvinoshamisa, akakanda bhiza nomutasvi wake mugungwa.
12. Mapisarema 21:1
Kumutungamiriri wokuimba, Pisarema raDhavhidhi. Mambo achafara nesimba renyu, Jehovha; Iye achafarisisa kuponesa kwako,
13. Zvakazarurwa 19: 1-2
Zvino shure kwezvinhu izvi ndakanzwa inzwi guru revanhu vazhinji kudenga, richiti, Hareruya! Kuponeswa, nokubwinya, nokukudzwa, nesimba, kuna She Mwari wedu, nekuti kutonga kwake ndekwechokwadi uye kwakarurama, nekuti akatonga mhombwe huru, yakaodza nyika nehupombwe hwayo, akatsiva ropa revaranda vake. paruoko rwake.
14. 1 Makoronike 22:13
Ipapo uchafambiswa zvakanaka, kana uchichenjera kwazvo kuita zvakatemwa nezvakatongwa, zvakarairwa Mozisi naJehovha pamusoro paIsraeri. Simba, utsunge moyo; usatya kana kuvhunduswa.
15. Ekisodho 23: 20-23
Tarira, ndinotuma mutumwa pamberi pako, kuti akuchengete panzira, uye kuti auye newe kunzvimbo yandakanga ndagadzirira. Umuchengete, uteerere inzwi rake, usamutsamwisa. nekuti haangakukangamwira kudarika kwako, nekuti zita rangu riri maari. Asi kana uchiteerera inzwi rake kwazvo, ukaita zvose zvandinotaura; Ipapo ndichava vavengi vavavengi vako, nomudzivisi wavadzivisi vako.
16. Mapisarema 112:8
Moyo wake wakasimbiswa, haangatyi, Kusvikira azivisisa vavengi vake.
Iye anochengetera vakarurama uchenjeri chaihwo; Ndiye mubato kuna vanofamba zvakarurama.
18. Numeri 14: 41-43
Ipapo Mozisi akati, Munodarikireiko murayiro waJehovha? asi haingabudiriri. Usakwira, nekuti Jehovha haazi pakati pako; kuti murege kurohwa pamberi pavavengi venyu. Nekuti vaAmareki navaKanani varipo pamberi penyu, muchaurawa nomunondo, nekuti makatsauka kuna Jehovha, saka Jehovha haangavi nemi.
19. Dheuteronomio 28:15
Asi zvichaitika, kana musingateereri inzwi raJehovha Mwari wako, kuti muchenjerere kuita mirairo yake yose, nezvaakatema, zvandinokuraira nhasi; kuti kutuka uku kose kuchauya pamusoro pako, nokukuwana.
20. 2 Makoronike 24:20
Ipapo mweya waMwari wakauya pamusoro paZekaria, mwanakomana womupristi Jehoyadha, iye akamira pakati pavanhu, akati kwavari, Zvanzi naMwari, Munodarikireiko mirairo yaJehovha, muchiramba kubudirira? nekuti makasiya Jehovha, naiye wakakusiyaiwo.
Previous nyaya30 Minamato yeMinamato Yekukunda Nemavhesi eBhaibheri
inotevera30 Nzvimbo Dzeminamato Dzinengozi Kumirisana Nevanodzvinyirira
Olufunlola Hassan Kubvumbi 16, 2020 At 11:26 am
Ini ndakabayiwa mwoyo nemafambiro aunoita minisita yako
Mwari ngavarambe vachishandisa isu kutifuridzira zvakadzama kuti hupenyu hwedu huvandudzirwe pamweya kuitira kuti tigonakidzwa nekusingaperi mukupedzisira
Selene jazmin Arreola López Mbudzi 9, 2020 Na1: 32 pm
Bhaibheri Rinobvumira Kurambana here?
30 Ndima dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu husingagumi kjv
MAPISAREMA 4 Kunyengeterera Rubatsiro
Makumi maviri eminamato yekutungamira kwaMwari uye nechirongwa